Radio Colombia inounza mawairesi eColombia ku iPhone yako | IPhone nhau
Radio Colombia inounza mawairesi eColombia ku iPhone yako
Pasina mubvunzo, maapplication eredhiyo akagadzwa pane maPhones evashandisi vazhinji, nekuti iyo Apple isina kusanganisira tuner redhiyo yakatungamira kutepfenyuro redhijitari pamusoro peInternet ichinge yakura zvakanyanya uye nekudaro zvakafanira kuve neimwe yeaya maapplication ekuteerera pane ako aunofarira nhare. Uye zvino yave nguva yemaradio eColombia.
2 Panguva dzose
Chikumbiro cheRadio Colombia chinopa vese veColombia mukana wekutevera nhepfenyuro kubva ku iPhone nekunakidzwa kukuru. Dhizaini yakashandiswa inosangana zvakakwana ine aesthetics yeIOS iyo yatave tichiona mumakore achangopfuura uye iyo interface iri nyore kushandisa, ichive iko iko kunyorera kwakakodzera kune vese vateereri. Uye zvakare, iyo app inowirirana ne VoiceOver, iyo inobvumira vakaremara kana vane maziso ekuona kuti vaishandise.
Tinogona kuwana redhiyo dzakakurumbira senge "Los 40 Principales", "Caracol", "RCN" kana "W Radio", pamwe nerunyorwa rukuru rwemaredhiyo epasi rose mune yepamusoro shanduro yekushandisa. Mawairesi ese anobatana nguva pfupi, kunyangwe tichifanira kugara tichifunga nguva dzese kuti kutapurirana kunoenderana nekutambirwa uye chirongwa chei iPhone yedu kuti zviitwe nemazvo, uye dzimwe nguva zvinogona kutemwa kana, semuenzaniso, tiine mashoma data kana kufukidza. kushomeka munzvimbo yatiri.
Radio Colombia inotora mukana wehunyanzvi hunowanikwa neApple kune vanogadzira, ndosaka iko kushanda kuri inoenderana zvizere uine multitasking kumashure - unogona kuenderera uchiteerera redhiyo kunyangwe nemamwe maapps kana nharembozha pane yakamira - pamwe ne3D Kubata mune yechizvarwa chemberi chePhones. Kune rimwe divi, ndeye Universal application iyo inogona kuwiriraniswa neICloud, saka kana iwe uine iyo iPad kana iPod touch iwe unogona kushandisa zvakafanana application pamwe neakafanana marongero nenzira yakajeka chose nzira.
Kudhaunirodha chishandiso chakasununguka zvachose kune chero mushandisi, kunyangwe vachitipa mukana wekutora yepamberi vhezheni inotipa maficha anonakidza asi asina kukosha, senge otomatiki shutdown timer kana iyo kubviswa kwemamwe ma ads zvinoonekwa izvo dzimwe nguva zvinoonekwa pachishandiswa chishandiso. Zvinogona kunakidza kune vakavimbika kwazvo vashandisi veapp, asi kana ukazvishandisa pakupedzisira, zvinogona kunge zvisina kubatsira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Radio Colombia inounza mawairesi eColombia ku iPhone yako
Andres T akadaro
Chinyorwa chakanaka, asi iripi iko chinongedzo chekushandisa? Ndiri kuda kuridhawunirodha.
Pindura Andres T
Ini ndinogovana yekutanga rondedzero, tsananguro yakanaka asi hapana chekuburitsa chinongedzo
Antonio Jose Rosario akadaro
Iyo Pro vhezheni inodhura zvakadii, hapana kwainowanikwa!
Pindura kuna Antonio José Rosario
Iwo makumi mashanu nemakumi mashanu emadhizaini akakosha munhoroondo zvinoenderana NGUVA
Nintendo anotsanangura chikonzero chekuunza Animal Crossing uye kwete Mario kune epuratifomu mapuratifomu